Home Onye na-ahụ n'anya FOOTBALL Alex Ferguson Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
Emelitere ikpeazụ December 18, 2017
LB na-egosi Full Story of a Football Manager kasị mara aha na aha njirimara; 'Fergie'. Anyị Alex Ferguson Child akụkọ na-enweghị isi akụkọ ihe omuma na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, Na-amalite.
Alex Ferguson Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Ndụ mbido
Sir Alexander Chapman Ferguson bụ nke a mụrụ na Glasgow Scotland, na 31st nke December 1941 site n'aka Alexander Beaton Ferguson (nna) na Elizabeth Hardie Ferguson (nne).
A mụrụ ya n'ụlọ nne ya ochie na Shieldhall Road na Govan mana o toro na ntinye na 667 Govan Road (bụ ebe e bibiri ya ugbu a). Mgbe ọ bụ nwatakịrị, o bi na nne na nna ya nakwa nwanne ya nwoke bụ Martin. Obodo ya, Gọọvan bụ mpaghara ọrụ ọrụ na Glasgow, Scotland. Onye ọ bụla bi n'obodo ahụ gụnyere papa Ferguson nwere ohere dị elu nke ịbanye n'ime ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri. N'ozuzu, o bi n'otu ụlọ na-ewu ụgbọ mmiri dịka nwatakịrị.
N'ịbụ onye toro, Alex gara Broomloan Road Primary School na mgbe e mesịrị Govan High School, ma kwadoro ụlọ egwuregwu football Rangers. Otú ọ dị, e nwere ihe dị iche banyere ya n'adịghị ka ụmụaka ndị ọzọ ọgbọ ya. Ọ bụ nwata nwere ọgụgụ isi, ma enwechaghị mmasị n'ịmụ ihe, ọ na-enwe mmasị karị n'ịkụ bọl.
Ọ họọrọ ịkụ bọl bọl na nwanne ya nwoke nke tọrọ ya, Martin, na ndị enyi ya site n'okporo ụzọ dị n'etiti ụlọ dị iche iche, na site n'enyemaka nke papa ya, ọ malitere ịghọ nwata na-eto eto.
Alex Ferguson Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Ndụ Ezinụlọ
Fergie si n'ezinụlọ dara ogbenye. O nwere ezinụlọ dara ogbenye ma nwee obi ụtọ na-amalite ndụ na mpaghara Gọọmenti Govan nke Glasgow. Papa ya adịghị atụchasị ihe ọ bụla dị elu na mbụ na ngalaba ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri. O kpebiri maka ịgba ndụ nke onye na-amu amu iji nye ya obere ụgwọ ọrụ.
Otú ọ dị, ọ bụ afọ isii ka a mụrụ Alex Ferguson na Alexander Beaton Ferguson lara ezumike nká site na onye ọkpụkpọ egwuregwu na-amakarị ekele maka ohere nke bịara n'ụgbọ mmiri Glasgow. Ọ gbanwere onye inyeaka . N'oge a, obi siri ya ike ma nwee ike ịzụta nwa okorobịa Alex (n'okpuru), nwanne ya na nne ya.
O di nwute maka Alex Ferguson, nne na nna ya niile nwụrụ na ọrịa yiri (cancer cancer) n'oge ha nọ na 67 nke dị n'okpuru afọ ndụ Britain. Otú ọ dị, ha abụọ bụ ndị na-ese siga. Nna Alex Ferguson nwụrụ maka ọrịa cancer akpa ume na afọ 66 n'afọ 1979. Nne Ferguson bụ Elizabet nwụkwara ọrịa cancer na-egbu egbu mgbe ọ dị afọ 64 n'afọ 1986. Ọnwụ ya mere mgbe ọ bụ nanị izu atọ mgbe ọ họpụtara dị ka Manchester United Manager. Ọnwụ ya na-enweghị atụ hapụrụ onye nlekọta ọhụrụ ahụ na nnukwu ihe mgbu ruo ọtụtụ ọnwa. Ọ bụ ihe kpatara nsogbu siri ike ya na ọrụ Manchester United. Otu ihe kpatara ya ka ọ na-atụtụbeghị. Ọ bụ ogologo oge iru uju na a "Mmetụta na-emerụ ahụ" ịtọhapụ ma ndị nne na nna otu ọrịa ahụ (kansa cancer).
Fergie na-ebute ụzọ na steeti Scottish 'Chọpụta Ọrịa Cancer' agha nke natara nchikota nke £ 30million. Alex Ferguson kwetara n'ihu mkpọsa ahụ n'ihi obi mgbawa nke ya na iji nweta ozi ahụ na nchọpụta mbụ nwere ike inye ndị mmadụ "Oge oge" iji soro ezinụlọ ha na-anọrị.
Ọ sịrị: "Ana m echeta na a gwara m na ndị mụrụ m nwere kansa cancer. M na-echeta ụbọchị a gwara m na mama m nwere ụbọchị ole na ole iji bie ndụ. Agara m n'ụlọ ọgwụ na dọkịta ahụ nọdụ ala, gwara m na o nwere ọrịa cancer nke anụ ahụ, kwuziri, sị: "Ọ dị ihe dị ka ụbọchị anọ iji bie ndụ". O ziri ezi. Ọ nwụrụ ụbọchị anọ mgbe e mesịrị. Ọnwụ ya na oge bụ otu n'ime ihe ndị kachasị njọ m hụtụrụlarịrị mere. Ma ihe dị iche ugbu a. Ụbọchị ndị a, ọrịa cancer akwara agaghị abụ ikpe ọnwụ. Ịchọta ya n'oge nwere ike ịzọpụta ndụ gị ma nyekwuo oge iji soro ndị ezinụlọ gị nọrọ. Achọrọ m itinye aka na mkpọsa a n'ihi na nne m na nna m na-arịa cancer cancer. Amaara m na cancer cancer nwere ike inwe na ezinụlọ. N'ihi ya, kama ime ihe ọ bụla gbasara ya, ana m agba onye ọ bụla na-eche nche ka ọ chọtara ya ngwa ngwa. "
Alex Ferguson Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Ndụ Ezinụlọ na Mmekọrịta
Alex Ferguson bi na South nke Manchester n'oge ọ bụ nwata. Ọ bụ n'obodo a ka ọ zutere nwunye ya ka ọ bụrụ, Cathy. Ha abụọ lụrụ na 1966.
Ha na - amị mkpụrụ ha ozugbo. A mụrụ nwa mbụ ha bụ Mak na 1968. Nke ahụ bụ afọ abụọ mgbe alụmdi na nwunye ha gasịrị.
Ha cheere ruo afọ anọ tupu ha enwee ike ịnwe ọzọ. Na 9th nke February, 1972, Alex Ferguson na nwunye nwere ejima mara mma ọzọ aha ya bụ Jason na Darren.
A kọwara Alex Ferguson dị ka di na-ahụ n'anya site n'aka nwunye ya bụ Cathy. Ọ hụrụ ya n'anya site n'ụbọchị. Ọ bụ onye na-adịghị ele ọrụ ndị inyom anya n'ụlọ. Mgbe ụfọdụ ọ ga - enyere aka na ụlọ ọ bụla na - arụ ọrụ.
Ndị enyi abụọ hụrụ ụmụ ha ka ha na-eto eto. Maka Alex Ferguson, "Ezinụlọ abụghị ihe dị mkpa. Ọ bụ ihe niile. "
A kọwawo alụmdi na nwunye ha dịka otu n'ime ndị kasị nwee ọganihu na UK. Ọtụtụ ndị achọpụtawo na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị. Ọlụlụ di na nwunye ha emeela ka ha nwekwuo afọ 51.
Alex Ferguson Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Na-etolite Ụmụaka
Nwa mbụ Alex Ferguson bụ Mark bụ onye na-azụbu Peterborough United na ndị bụbu ndị ọkachamara n'ịgba chaa chaa.
Otu n'ime ejima ejiri aha ya bụ Daren kpuchie n'okpuru obere oge a na-egwu n'okpuru nna ya Manchester United site na 1990 ruo 1994. Ọ na-achịkwa ugbu a Doncaster Rovers dị ka n'oge ederede.
Nwa ejima ọzọ, Jason Ferguson na-akpọ otu ụlọ ọrụ football 'Elite Sport'bụ nke ya na Manchester United na-emekọ ihe n'oge afọ nna ya na-elekọta ụlọ. Ọ na-ejikwa ụlọ ọrụ na-elekọta ụlọ ọrụ.
Alex Ferguson Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Esemokwu David Beckham
O doro anya na Ferguson weere David Beckham ka ọ bụrụ otu n'ime isi nchịkwa ya. Ọ hụrụ Beckham n'anya; o chere na ya bu nwa nwoke, o nweghi ihe o bula ma o bu obi uto maka uzo o siri chita nro ya; maka ume ya, nnọgidesi ike ya na ọchịchọ ime ka ndị mmadụ mehie. Mana Ferguson kwenyere na Beckham chefuola ihe kpatara ya kpakpando, na-arịwanye elu, na-eleghara ọrụ ike na nkwụsị.
Na 2003, Ferguson so na otu onye otu ọkpọkorita David Beckham nọ na-arụ ụka. Ọ boro Beckham ebubo na ọ naghị akwụghachi azụ na mgbaru ọsọ Arsenal na Old Trafford. E kwuru na Ferguson tụbara bọlbụ n'ebubo, na-akụ onye ọkpụkpọ na ihu ma kpatara Beckham ihe ọjọọ.
David Beckham mere ihe. O kwere ka a na-esere ọnya ahụ ma gbaa ajụjụ ọnụ n'echi ya. Mgbe Ferguson hụrụ ihe omume ya, o kpebiri ire ya. O kwenyere na Beckham chere na ọ dị nnukwu karịa ya na ụlọ ọrụ ahụ.
Ferguson dere na Beckham chere ihu na ihu ya ka ọ bụrụ onye a ma ama. Dị ka ya si kwuo 'O nwere ezi uche ịchọta onye a ma ama n'ọhịa mgbe ọ merụsịrị ahụ'.
Ọ na-edekwa na ọ dịghị "Ihe egwuregwu footballing" ka Beckham gaa Los Angeles. 'O mebiri ohere ịghọ akụkọ akụkọ kachasị na United States.' ka Ferguson na-ekwu.
Alex Ferguson Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Mkparịta ụka ya na Roy Keane
Sir Alex Ferguson na-akọwa foto nke Roy Keane, onye bụbu onyeisi ụgbọ mmiri na onye isi ya, dị ka onye jọgburu onwe ya na nke na-atụ ụjọ, nke nwere ike ịtu egwu ya na, n'ezie, ọtụtụ ndị na-egwu n'ime ime ụlọ. Keane na-eji aka ígwè na ire ọjọọ, nke Ferguson kwuru bụ akụkụ kasị sie ike nke ahụ ya.
Ọkpụkpụ ha ghọrọ akụkụ nke akụkọ ihe mere eme Old Trafford na Ferguson na-eleba anya na ọdịda nke ike nke Keane na obi nkoropụ ọ na-enwe n'ihi ya.
Keane were iwe n'ihi ihe ọ chere na ọ bụ ihe adịgboroja n'ihe eji eme ụlọ n'oge ụlọ akwụkwọ Manchester United. Ọ gara n’ihu inye ihe akpọrọ 'mkparita mkpamkpa a gbara MUTV ebe ọ katọrọ Ferguson na ọtụtụ ndị otu ya gụnyere Kieran Richardson, Darren Fletcher, Alan Smith, Edwin van der Sar na Rio Ferdinand.
Keane na-atụ aro ka squad na-elele ajụjụ ahụ ka ha wee nwee ike ime uche nke onwe ha na ihe na-esote bụ esemokwu dị egwu n'etiti ya na ọtụtụ n'ime ndị egwuregwu ahụ, ya na Ferguson. Ọ ghaghị ime ihe, ọ kwadoro ụgwọ nkwekọrịta Keane na ọpụpụ ya na Celt.
Ferguson na-ede na Keane gbasiri ike ịhụ ya ka ọ rịọ mgbaghara, ma mmekọrịta ahụ emesị bụrụ ihe ọjọọ mgbe nkwupụta ihu ọha dị n'etiti ụzọ abụọ ahụ.
Alex Ferguson Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Ihe gbasara nsogbu
Alex Ferguson nwere nsogbu na Ruud nke o kwuru wee bịa n'ihi enweghị nkwanye ùgwù ya. Nsogbu ha kpatara ihe mere Ruud van Nistelrooy ji hapụ Manchester United n'okpuru ọnọdụ ọjọọ na 2006. Okwu ha malitere mgbe Ruud kwupụtara iyi n'ihu ya ma kọchaa ya mgbe ọ nọsịrị ike n'oge Cup Carling Cup megide Wigan.
Ferguson na-ekwu na ya atụghị anya na ọ ga-akwụ Real Madrid ọganihu kama àgwà ya mgbe ọ na-amanye aka ya. Otú ọ dị, Van Nistelrooy kpọrọ fon na Ferguson na-acha anụnụ anụnụ na Jenụwarị 2010 ịrịọ mgbaghara maka omume ya.
Alex Ferguson Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Na-echeta ndi egwu egwu
Mgbe ọ nwụsịrị nwa ya nwoke bụ Darren Ferguson Preston North End, Ferguson were iwe wee cheta ndị Reddy De Laet, Jọshụa Eze na Matty James si Preston n'okpuru usoro nlekọta ọhụrụ ya. O mesịrị kọwaa na ọ bụ arịrịọ nke ndị egwuregwu ahụ ka ha ghara ịlaghachi na Preston mgbe mgbanwe nke njikwa. Onye na-elekọta Stoke City Tony Pulis gbasoro ngwa ngwa mgbe o chetara ndi ozo nke Manchester United ndi si Preston, kwuputara na ndi choro ka ha gbakwunye usoro onu ogugu ndi otu ya.
Alex Ferguson Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Ozugbo Edemede Gareth Bale ka ọ pụọ
Sir Alex Ferguson adịghị echegbu onwe ya banyere ndị na-apụnahụ, mana onye isi ụlọ ọrụ United Manchester na-eme ihe ndị ọzọ Gareth Bale, na-ekweta na ọ nwụfuru na onye ọkpụkpọ.
Otu akụkọ sitere na Manchester United Scouts kwuru na Bale na-ezute Ferguson ka ọ bụrụ onye na-eji aka ekpe ekpebi Ryan Giggs. Ferguson n'onwe ya rịọrọ ndị na-agụ akwụkwọ ka ha bịa kpọta Bale. Otú ọ dị, e nwere ihe mere ka nnyefe ahụ daa. Alex Ferguson mgbe ọ hụrụ mkpesa na ọ dị mkpụmkpụ.
Alex Ferguson Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Ọrụ nlekọta na Nchịkọta
Ferguson nke 32 malitere ọrụ nchịkwa na East Stirlingshire nke dị na 1974, na-emetụta ọkụ ya na asọmpi ya ozugbo. Ọ kwagara St. Mirren mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, ọ bụ ezie na ọ na-eduga ndị nsọ na asọmpi nke mbụ nke Scottish na 1977, a chụpụrụ ya otu afọ mgbe e mesịrị maka imebi nkwekọrịta.
Ọ bụ na Aberdeen na Ferguson kwadoro aha ya dịka onye nchịkwa ụgbọ elu. N'ịbụ onye na-agbaji ndị na-agba Celt-Rangers, Ferguson dugara Aberdeen ka ọ bụrụ isi akwukwo atọ nke Scottish, iko anọ Scotland, otu Njikọ Njikọ, Super Cup na Cup Cup Winners nke karịrị iri asatọ.
Alex Ferguson weere dị ka onyeisi nke Manchester United na Mahadum 1986. A na-akọ ọrụ ya n'ahịrị ahụ mgbe ọnyá siri ike rute n'oge nke oge 1989-90. Ndị ogbenye ya malitere cam n'ihi ọnwụ nne ya. Ọ nọrọ ogologo oge na-ewute nne ya nwụrụ nke cancer cancer nke na-eme ka ọ bụrụ ya ọrụ. Ọ dị mma na ya, Ndị Mmụọ Ọjọọ ahụ hụrụ na mgbake na merie FA cup n'oge mbụ ya. Nke ahụ mere ka ọ rụọ ọrụ ya. A na-ekwu na ihe ịga nke ọma na-esote MA ndị ọzọ ha na-ekwu bụ akụkọ ihe mere eme.
Alex Ferguson Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Ebube ya
Ihe oyiyi ọla nke Ferguson, nke onye na-ese Scottish mere Philip Jackson, ekpughere n'èzí Old Trafford na 23 November 2012.
Na 14 October 2013, Ferguson gara ememe ebe a na-edegharị okporo ụzọ dị nso na Old Trafford Mmiri na-abịa na Sir Alex Ferguson Ụzọ.
Moreso, Nkebi ahịrị "Oge nkwụsị" nke Ferguson chepụtara banyere ntụle ikpeazụ nke mgbampi egwuregwu nwere gụnyere Collins English Dictionary na Oxford English Dictionary.
Alex Ferguson Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Ndị nlekọta ozuzu
Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu Ferguson na-aga n'ihu ịghọ ndị isi egwuregwu, gụnyere Tony Fitzpatrick, Alex McLeish, Gordon Strachan, Mark McGhee, Willie Miller, Neale Cooper, Bryan Gunn, Eric Black, Bryan Robson, Steve Bruce, Mark Hughes, Roy Keane , Paul Ince, Chris Casper, Darren Ferguson, Ole Gunna Solskjær, Henning Berg na Gary Neville.
Alex Ferguson Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Politics
E nyere ya British Chiefs na 1999 maka onyinye ya na egwuregwu nke football. Na 1998, a na - akpọ Ferguson na ndepụta nke nnukwu ego nyere ndị Òtù Na-arụ Ọrụ. Ọ bụ onye na-akọwa onwe ya na onye na-akwado ọrụ na-arụ ọrụ ndụ niile. Na January 2011 Graham Stringer, a Labor MP na Manchester na Manchester United na-akwado ya, na-akpọ ka Ferguson ka a onye ọgbọ ndụ. Ọ bụrụ na nke a mere, ọ ga-eme ka Ferguson bụrụ onye nhazi mbụ ma ọ bụ onye ọbụla na-abụbu ma ọ bụ onye nlekọta football iji nọrọ na Ụlọ ndị nna. Stringer na onye uweojii na-arụ ọrụ na Manchester Paul Goggins kwughachiri oku a mgbe Ferguson kwupụtara ezumike nká na May 2013. Otú ọ dị, ebe a na-akpọghị aha na Oyiyo ubochi akwụkwọ akụkọ kwuru na 1 August 2013 nke Ferguson kwetara.
n'oge Nnwere onwe nnwere onwe 2014 Scotland, Ferguson bụ onye na-akwado olu ma na-atụ egwu nke Mma ọnụ mgbasa ozi na-akwado Scotland fọdụrụ akụkụ nke United Kingdom. Ọ katọrọ Ndị Nlekọta Scottish, na onye ndu ya Alex Salmond, n'ihi na ha kpebiri ịhapụ ndị Scots bi n'èzí Scotland, ma n'ime United Kingdom, site na ịme ntuli aka na referendum.
Alex Ferguson Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Education
Na 2009, Ferguson natara akara ugo mmụta na nchịkwa azụmahịa si n'aka Mahadum Metropolitan Manchester.
Ọ bụ akara nke abụọ o nwetara na mahadum, mgbe ọ natachara ndị isi na 1998.